ဉာဏ်စမ်းပဟေDAYိတစ်ရက် - ဒီခရစ်စမတ်ပဟေTAKEိကိုဖြေပြီးဘာကိုဘွဲ့ရမယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ကိုငါတို့ပြောမယ် - သတင်း
ဉာဏ်စမ်းပဟေmasိတစ်ရက် - ဒီခရစ်စမတ်ပဟေquိကိုဖြေပါ။ မင်းတို့ဘာဘွဲ့ရမလဲဆိုတာကိုမင်းတို့ပြောလိမ့်မယ်
ဒါဟာယခုနှစ်အရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်အချိန်ပါပဲ။ ခရစ်စမတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်အမှန်တကယ်ကောင်းပါသည်။ The Tab Lancaster ၏ ၁၂ ရက် Quizmas ပြန်လာခြင်းနှင့်အတူခရစ်စမတ်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုပြန့်နှံ့စေရန်မည်သည့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်း?!
ဒါကမှန်တယ်, ရှေးရှေးကျနော်တို့ပြန်နေ - ငါတို့သည်သင်တို့၏အသက်တာတစ်ခုလက်မအတွင်း၌သင် quizzing ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့, ကအားလုံးအလွန်ပွဲလမ်းသဘင်ပါပဲ။ ငါတို့သည်အားလပ်ရက်စိတ်ဓာတ်၌သင်တို့ကိုပြန်ဤအခက်အခဲကာလ၌အချို့သောပွဲလမ်းသဘင်ရူ့ပြန့်နှံ့ခြင်းနှင့်ဖြန့်ကျက်ခြင်းငှါ (ပြန် ဖြစ်နိုင်စရာ ) လာတော့မယ့်လောကရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားပါစေ။
ဒီနေ့ရဲ့ပူဇော်သက္ကာတစ်ခု good'un ဖြစ်ပြီး, သငျသညျအကြှနျုပျတို့၏ခရစ္စမတ်အသေးအဖွဲပဟေanswerိဖြေဆိုလည်းရိုးရှင်းပါတယ်, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူ Lancaster Uni မှဘွဲ့ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်အဆင့်သင်ပြောပြလိမ့်မယ်! လွယ်ကူပါတယ်။
မင်းရဲ့ Santa ကိုမင်း Scrooge ကနေသိလား ခရစ်စမတ် pudding မှ Mince ပိုင်? ပွဲလမ်းသဘင်မုန့်ကနေစောင်ထဲမှာဝက်? ကောင်းပြီ, ငါ့သူငယ်ချင်းများ, ငါတို့အထဲကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပုံပါဘဲ
ဒါကဆင်းရကုန်အံ့, အလုံအလောက် waffle ပါပဲ။
Quizmas Day တစ်ခုပါ။ ဒီခရစ္စမတ်အသေးအဖွဲဉာဏ်စမ်းပဟေquိကမင်းဘယ်လိုဖြေရမလဲ။
မင်းရဲ့ကောလိပ်ကဘယ် 'တကယ်တကယ်ချစ်' လဲ။